कोटेश्वर-जडीबुटी सडक विस्तार एक महिनाभित्रै, हट्ला त भक्तपुरदेखिको जाम ? « GDP Nepal
कोटेश्वर-जडीबुटी सडक विस्तार एक महिनाभित्रै, हट्ला त भक्तपुरदेखिको जाम ?
काठमाडौं । कोटेश्वर जडीबुटी सडक विस्तार एक महिनाभित्रै सम्पन्न हुने भएको छ । उपत्यकाकै सर्वाधिक जाम हुने क्षेत्रको रुपमा रहेको यो क्षेत्रमा सडक विस्तारले कार्यालय समयमा भक्तपुरदेखि हुने जाममा केही कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यही गतिमा काम हुँदा अबको एक महिनामा सम्पन्न गर्न सकिने डिभिजन प्रमुख कुवेर नेपालीले बताउए । नेपालीका अनुसार अर्को दिशामा भने एउटा घरका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । घरधनीले मुआब्जा रकममा उपभोग क्षेत्रका आधारमा माग गरेका छन् ।
त्यो घरबाहेक अन्यत्र काम गर्न समस्या छैन । उनका अनुसार त्यो घरको पनि सहमति भएपछि दुई महिनासम्ममा सकिनेछ ।
यो सडकमा तीन लेन थपिएपछि यहाँको सवारी चाप केही कम हुनेछ । सडक कार्यालयले निर्माण शुरु गर्नुभन्दा पहिले सडकका दुवैतर्फको निर्माणस्थल खाली गरेको थियो ।
देशभरका अधिकांश सडक निर्माणमा त्यहाँ रहेका पूर्वाधार हटाउँदै काम अघि बढाइएको छ । यहाँ भने सडकका संरचना हटिसकेपछि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ लाग्दा देब्रे (उत्तरतर्फ) एक लेन र दाहिने (दक्षिणतर्फ) दुई लेन थप्ने गरी निर्माणस्थल खाली भइरहेको छ ।